VaChidyausiku Votarisirwa Kunzwa Zvakare Nyaya yeAnglican Church muHarare
Mutongi mukuru weSupreme Court Chief Justice Godfrey Chidyausiku neChina vari kutarisirwa kunzwa nyaya kumahofisi avo ari kudare repamusorosoro iri yekunetsana kuri kuita mapoka maviri echitendero cheAnglican, pamusoro pekunetsana panyaya yezvivakwa zvechechi nezvimwe zvakadaro.
VaChidyausiku vakapa mutongo mwedzi wapera wekuti Bishop veHarare VaNolbert Kunonga ndivo vane simba rekutonga zvivakwa zvechechi zvese, izvo zvavapa simba rekuburitsa mudzimba nechisimba nherera, vafundisi, masister nevamwe vachiti ndedzavo.
Rimwe boka rinotungamirirwa naBishop Chad Gandiya riri kuti VaKunonga havana simba pazvivakwa zvechechi nekuti vainga vambobuda muchechi uye vari kushandisa mapurisa nevakuru muhurumende kuti vawane simba rekuita zvavari kuita.
VaPrecious Shumba vanowe mutauriri weCPCA vati havasi kufara seCPCA nezvaitwa naVaChidyausiku kuti vanzwe nyaya iyi vega kwete kuti dare rese reConstitutional Court.
Bishop Alfred Munyanyi, mutauriri wedivi raVaKunonga, vati vanhu veCPCA vacharamba vachidzingwa mudzimba kunyangwe hazvo nyaya iyi ichiri kumatare, vachiti vakatopihwa kare simba rekutora zvivakwa zvechechi nemutongo wakaturwa naVaChidyausiku.
Hurukuro naBishop Alfred Munyanyi